Bogga ugu weyn Beddelka ugu Fiican PayPal ee eBay | Si Wanaagsan U Shaqeeya
Ka dib markii ay hoos u dhigtay PayPal oo ah mashiinka lacag -bixinta ugu weyn, eBay waxay u dhaqaaqday inay qorto tiro wanaagsan oo ikhtiyaarro lacag -bixin ah oo si fiican ugu shaqeeya adeegsadeeda. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato iyaga? Ila joog
Sida laga soo xigtay BBC.com, mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee eBay u biloowday ikhtiyaarrada lacag -bixinta ee beddelka ah ayaa ah in beddelka cusubi u oggolaanayo dadka wax ka iibsanaya eBay inay bixiyaan iyagoo aan ka tagin degelkeeda, iyo iibiyeyaashu waxay yeelan doonaan kharashyo wax -qabad oo hooseeya. Taasi waxay u egtahay mid la yaab leh, sax?
Aynu eegno beddelka lacag -bixinta ugu fiican ee PayPal ee eBay. In kasta oo ay tani u ekaan karto wax kasta oo raalli ka ah iibsadayaasha eBay, tani macnaheedu ma aha in iibiyeyaashu ku iibin karaan eBay iyadoon lahayn koonto PayPal?
Ma ku iibin karaa eBay aniga oo aan lahayn koonto PayPal?
Si aad ugu iibiso eBay adigoon lahayn koontada PayPal, waxaad u baahan tahay oo kaliya mid ka mid ah qaababka lacag-bixinta ee online-ka ah ee la aqbali karo. Waxaad samayn kartaa ganacsade online ah credit card koontada eBay iyada oo aanad ku xaddidnayn isticmaalka barnaamijka kaarka deynta ee PayPal si aad sidaas u yeelatid.
Inkastoo eBay iyo PayPal kala qaybsanaanta 2015 iyo noqoshada shirkado dadweyne oo gaar ah, PayPal waa hab badbaado leh oo hufan oo lagu bixiyo eBay. Hadda, inteena badan ayaa laga yaabaa inaan dooneyno inaan ogaano sababta eBay ay u kala qaybisay PayPal sanadka 2015.
ARAG SIDOO KALE: Sida Loo Iibiyo Laptop -kaaga Jaban Si Degdeg ah
Maxay eBay uga tagtay PayPal
Sida laga soo xigtay eBay, u guuritaanka ka -bixitaanka PayPal ilaa Adyen waxay ku jirtaa dalab "kor loogu qaadayo waayo -aragnimadeeda macmiil" iyada oo dhexdhexaadinaysa lacag -bixinnada suuqgeeda iyada oo aan lahayn koorso aad kaga baxdo madasha.
Nidaamkan aan xadka lahayn wuxuu awood u siinayaa eBay inay maamusho socodka lacag-bixinta, iyada oo caddaynaysa khibradda dhammaadka ilaa dhammaadka ee iibsadayaasha iyo iibiyeyaasha, ”ayay shirkaddu ku tiri bayaan.
Sidaa darteed, dhiirrigelinta ugu weyn ee ka -beddelka PayPal illaa Adyen waa in la wanaajiyo khibradda adeegsadaha.
Intaa waxaa sii dheer, dabeecadda tartanka ee dhulka eCommerce -ka ma bannaana in lagu qanco. Markaa, halkii loo guuri lahaa si loo dhammaystiro lacag -bixinta sida lagu sameeyay PayPay, eBay waxay ka heshay Adyen ikhtiyaar ka fiican
Adeegga Adyen wuxuu fidiyaa in ka badan 150 lacagood iyo in ka badan 200 hababka lacag -bixinta, taas oo siisa dabacsanaanta kordhaysa dadka isticmaala eBay.
Shirkadda fadhigeedu yahay Netherland, Adyen waxay leedahay macaamiil aad u sarreeya, oo ay ku jiraan Uber, Netflix, iyo Easyjet.
ARAG SIDOO KALE: Sida Lacag Loogu Sameeyo Forex Iyada Oo Aan La Ganacsan | 2022
Ma Jirtaa Beddel Lagu Sameeyo PayPal on eBay?
Sannadkii 2018, eBay waxay heshiis la saxiixatay shirkadda Dutch ee Adyen si ay u socodsiiso lacag-bixinta, laakiin iibsadayaashu waxay wali awoodi doonaan inay ku isticmaalaan PayPal goobta illaa ugu yaraan 2023. Marka tan tan, shirkadda fadhigeedu yahay Amsterdam waa ujeedo.
Paymate iyo ProPay waa adeegyo kale oo la mid ah PayPal in la aqbalo on Arbacada ah. Arbacada ah waxay sheegaysaa in labada adeegba ay leeyihiin faa'iidooyin la mid ah kuwa ay leeyihiin Moneybookers: lacag -bixintu waa la raad -raacayaa, isla markiiba, waana la samayn karaa diiwaangelin la'aan.
Beddelka PayPal ee eBay
eBay waxay heshiis la saxeexatay Adyen, oo ah processor -ka lacag -bixinta ugu sarreeya adduunka, si uu u noqdo lacag -bixinteeda asaasiga ah
On Ayden, adeegsadayaashu waxay bixin karaan lacag bixin iyagoo aan ka tegin goobta. Adyen wuxuu ku takhasusay nidaamyada lacag-bixinta dambe ee ganacsatada internetka.
Moneybookers waa a adeega lacag bixinta elektarooniga ah taas oo u dhiganta PayPal oo ay eBay u aqbasho ikhtiyaar lacag-bixineed. Marka loo eego eBay, Moneybookers xiddiguhu waxay raadiyaan lacag-bixinnada la raadin karo, taasoo u oggolaanaysa isticmaaleyaasha inay la socdaan heerka macaamilka iyagoo isticmaalaya akoonnada eBay; lacagaha degdega ah; oo lacag ku bixi eBay la'aanteed.
Bixiye iyo ProPay
Paymate iyo ProPay waa adeegyo kale oo la mid ah PayPal oo laga aqbalo eBay. Labada adeegba waxay leeyihiin faa'iidooyin la mid ah kuwa Xisaabayaasha: lacag -bixinta waa la raad -raacayaa, isla markiiba, waana la samayn karaa diiwaangelin la'aan.
Escrow waa hab lacag bixin ah oo ku dhegan bixinta iibsadaha ilaa shay la helo oo la ansixiyo. Sida laga soo xigtay eBay, Escrow waxaa lagula talinayaa alaabada qiimaha sare leh. Escrow waa ikhtiyaar laga heli karo xaraash kasta oo eBay ah, laakiin inta badan waxaa loo adeegsadaa macaamil ganacsi dhan $ 500 ama ka badan.
Ku bixi Qaadista
Lacag-bixinta lagu soo qaado waa ikhtiyaar lacag-bixineed oo eBay u oggolaanaya iibiyeyaasha inay la kulmaan iibsadayaasha goob iyo waqti ka hor intaanay lacag bixin.
Tani waxay u ogolaanaysaa iibsadaha inuu si shakhsi ah u eego alaabta ka hor inta aan la bixin oo ay meesha ka saarto kharashka dhoofinta.
Xaaladaha qaarkood, qaar ka mid ah iibiyayaashu waxay ku soo rogaan kharash dheeraad ah qof ahaan wax ka soo qaadis ah, iyo in marka iibsaduhu soo qaato badeecada, uu isticmaali karo doorasho kasta oo lacag bixin ah oo uu aqbalo iibiyuhu, sida lacag caddaan ah, jeeg, amar lacageed, ama credit card si aad u bixiso iibsiga.
Kaarka Deynta Ganacsiga
Iibiyeyaasha eBay waxay leeyihiin ikhtiyaarka ah inay aqbalaan bixinta kaarka deynta iyagoo adeegsanaya koontada ganacsadaha Internetka. Kani waa nooc koonto bangi oo u oggolaanaya meheraddu inay aqbasho bixinta kaarka deynta iyo kaarka deynta.
In kasta oo PayPal laga yaabo inay macno u yeelato qaar ka mid ah adeegsadayaasha eBay, xulashooyinka qaarkood ayaa aad ugu habboon in la isticmaalo. Sidaa darteed, iibsadayaasha iyo iibiyeyaashu waa inay tixgeliyaan inay fiiriyaan beddelladan PayPal ee bakhaarradooda eBay si ay u dammaanad qaadaan inay ka helaan macaamil kasta.
eBay vs Etsy: Madal Iibinta ugu Fiican 2022 | Eeg Natiijada
Sidee Paypal Lacag Uga Sameysaa | 2022 | Qaab Ganacsi oo Buuxa
Dib -u -eegista Hashflare 2022: ma sharcibaa mise waa khiyaano kale oo macdanta daruuriga ah?
15 Shirkadaha Tamarta Tamarta ee ugu sarreeya sanadka 2021
Markaad haysato qof kaa caawin kara inaad socodsiiso hawlaha adiga oo aan wax lacag ah kugu soo oogin mar kasta, waxaan ku sharadiyay tan…
Sida Loo Bilaabo Meherad Waqooyiga Carolina 2022: Tusaha Ugu Dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Si loo helo macaamil ganacsi oo fudud, Forbes waxay North Carolina (NC) ku qiimeysay inay tahay tan ugu horreysa qaranka. Sidaa darteed, samaynta…